The True Spirit of Patriotism - We Love Myanmar
This isaplace i express my love for myanmar...
The True Spirit of Patriotism
Posted on September 3, 2017 September 4, 2017 by We Love Myanmar
မိမိလူမျိုးနှင့် မိမိတိုင်းပြည်ကို စစ်မှန်စွာ ချစ်သူတို့အနေဖြင့် မိမိလူမျိုးနှင့် မိမိတိုင်းပြည်ကို တစ်ဦးတစ်ယောက်က စော်ကားတဲ့စကားပြောလိုက်တာနဲ့ အနည်းအများ ခံစားချက်ရှိကြပါတယ်။ ထိုနည်းအတူ သူတပါးလူမျိုးနှင့် သူတပါးတိုင်းပြည်ကို နှုတ်အားဖြင့်ဖြစ်စေ စော်ကားတဲ့စကား ဘယ်တော့မှ ပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မိမိလူမျိုးနှင့် မိမိတိုင်းပြည်ကို ချစ်သည်ဆိုသည့်အခါ သူတပါးလူမျိုးနှင့် သူတပါးတိုင်းပြည်ကို စော်ကားမှ မိမိလူမျိုးနှင့် တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်သူ၊ ချစ်ခင်သူဟု ထင်သူများသည် မှားယွင်းပါတယ်။
ကျမအနေနဲ့ ငယ်စဉ်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူမျိုးစုမျိုးစုံကြားမှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရပါတယ်။ ကျမလူမျိုးကို အထင်သေးတဲ့ စော်ကားတဲ့စကားတွေကို ကြားခဲ့အခါ မိမိကိုယ်တိုင် တကြိမ်တခါမှ ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ထိုသူတို့ရဲ့ နိမ့်ကျတဲ့ အပြောအဆို အတွေးခေါ်နဲ့တန်းတူ အောက်ကိုမဆင်းချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တခြားဒေသမျိုးစုံမှာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာတာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ ကြုံဆုံခဲ့ရလာတဲ့အခါ ငယ်စဉ်က လူမျိုးစုအနည်းငယ်အကြား သင့်မြတ်အောင် နေထိုင်တတ်ခဲ့တဲ့အကျင့်က များစွာ အထောက်အကူပေးလာပါတယ်။
ကျမဘိုးဘွားစဉ်ဆက်သမိုင်းမှာ ပထမကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တော့ ထိုစဉ်က ချင်းတိုင်းပြည် (ယခု ချင်းပြည်နယ်) မှာ ဗြိတိသျှကိုလိုနီအစိုးရ၀င်လာသောအခါ ပထမဦးဆုံး တော်လှန်ရဲသည့် သတ္တိရှိသည့်အမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုတော်လှန်ရေးသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် နှစ် ၁၀၀ ပြည့်ပါတော့မည်။
ကျမကတော့ တခြားမျိုးချစ်ပုဂိုလ်တွေလို နိုင်ငံအတွက် အသက်ကိုပေး၊ စစ်သင်တန်းတက်၊ စစ်တိုက် ဆိုတဲ့ ဂုဏ်တွေမရှိပေမယ့်လို့ မြန်မာနိုင်ငံခက်ခဲစဉ်က ပြည်ပမှာ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ ခရီးသွားလို့ အိမ်နီးနားခြင်းနိုင်ငံတွေကို ထရန်စစ်ဝင်တဲ့အခါ အထင်သေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ အကြည့်ခံရတဲ့ ခံစားချက်၊ ဝေးလံတဲ့နိုင်ငံရောက်သွားတဲ့အခါ လူသတ်တဲ့နိုင်ငံလားလို့ အကြိမ်ကြိမ် အမေးခံရတဲ့ ခံစားချက်၊ …. ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေများစွာ ကြုံလာပြီးတဲ့နောက်၊ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိုပြီး မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ သက်လာစေပါတယ်။ ကျမအနေနဲ့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ လူမျိုးအားလုံးကို တလုံးတ၀တည်းအဖြစ်ဘဲ မြင်ပါတယ်။ ပြည်ပရောက်နေတဲ့ သူတွေလဲ ကျမလိုဘဲ ခံစားကြမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ နေထိုင်သူအချင်းချင်းလဲ တလုံးတ၀တည်းဖြစ်တယ်လို့ မြင်စေချင်ပါတယ် မြင်တယ်လို့လဲ မျော်လင့်ပါတယ်။
ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံများမှာ အစိုးရ၀န်ထမ်း၊ ပညာရေးကျောင်းမှာ စာသင်ပေးသူများမှ လူမျိုးခွဲခြားတဲ့စကားပြောမိတယ်ဆိုရင် ထိုသူကို တာဝန်ရှိသူများမှ အလုပ်ကနေ ထုတ်ပယ်လေ့ရှိပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားများစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလဲ ဒီလိုမျိုး ကျင့်သုံးစေချင်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့တဲ့တိုင်းပြည် ဖြစ်ချင်ရင် လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့စကား မပြောဆိုရန် တာဝန်ရှိသူများမှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ ထိုမှသာ မလိုလားအပ်တဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ရှောင်တတ်လာပါမယ်၊ မဖြစ်ပေါ်သင့်တဲ့ လူမျိုးရေးပြသနာကိုလဲ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးချစ်စိတ်ရှိသူတို့၏စိတ်ဓါတ်အမှန်ဆိုတာ မိမိနိုင်ငံ တိုင်းပြည်အား နယ်ချဲ့ရန်မှ အသက်ပေး ကာကွယ်သူဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးချစ်စိတ်ရှိသူတို့၏စိတ်ဓါတ်အမှန်ဆိုတာ သူတပါးလူမျိုးကို အနိုင်မကျင့်၊ အထင်မသေး၊ မစော်ကားသောသူ ဖြစ်ပါတယ်။
(စာတိုသည်မို့ မပြည့်စုံရင် သီးခံပါလို့ အဆင်ပြေရင် ဆက်ပါမယ်)
Levi Sap Nei Thang
I Love Myanmar
This entry was posted in Myanmar and tagged I Love Myanmar, Levi Thang, We Love Myanmar.
The Power of Apologizing
Illegal Immigrants in Myanmar
695 thoughts on “The True Spirit of Patriotism”
Mai Lal Em Par says:
Shwe Mi says:
အစ်​မရဲ့ အမျိုးချစ်​တဲ့စိတ်​ကို ​လေးစားဂုဏ်​ယူပါတယ်​
Levi Sap Nei Thang says:
ကျွန်​မလည်းအ​​ဖေ ကပါး က ချင်းအ​မေကရှမ်းလူမျိုးပါအစ်​မ
Ko Linn Naing says:
Ni Ni Myint says:
Sandar Htwe says:
A Lynn Yaung says:
ရာဇ၀င်​ ထဲ ​ရောက်​သွားသလိုပါဘဲ
ရာဇ၀င်​ များရဲ့ သတို့သမီး သီချင်းကို
September 3, 2017 at 8:49 pm
စံပယ် ပန်း လေး says:
Poe Poe says:
September 6, 2017 at 5:46 am
Lkcyun Yun says:
Soe Myint Aye says:
ZawMin Htet says:
Ma Kyar Nyo says:
Theinthein Nyunt says:
Salai Aung Myint says:
” We are Myanmar ” စိတ်ဓါတ်ထားနိုင်မှ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းတိုးတက်မည် မြန်မာပြည်ကိုချစ်တဲ့ညီမကို လေးစားအားပေးလျှက်ပါ
Ko Ye says:
KS W Win says:
ဆက်ပါအုံး အဆင်ပြေရင် 🙂
K Swe Win says:
Aye Myint Tun says:
I Love Myanmar says:
ပီ တိ says:
Pan Thitsar says:
Kyaw Than Tun says:
Ko Zaw Kyi says:
September 3, 2017 at 9:23 pm
ညီနိုင်း စစ် says:
Suilian Thang says:
Than Mani says:
Salai Zaw Thin says:
သွေး သောက် says:
စစ်​သူကြီရဲ ၂​ယောက်​ ဂျာမှာရပ်​​နေတာ မြန်​မာကွ
Thaw Zin Myo says:
Mya Thandar says:
မြန်​မာပြည်​​ထောင်​စု စိတ်​ဓာတ်​ ရှိ​နေတဲ့ မမကို အမြဲတမ်း ​လေးစား​နေပါတယ်​
Mang Parel says:
U Win Naing says:
လူ့သားကို တန်ဖိုးထားတတ်သောအမြင်၊ တန်းတူညီတူ သဘောထားရမည့် စိတ်ဓာတ်ကောင်းတို့ ရှိကြဖို့ လိုအပ်နေချိန်အကျိုးရှိစာသားများ ရေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ တိုင်းရင်းသားချင်း လေးစားချစ်ကြည်ကြမှ နိုင်ငံ အဓွန့်ရှည်မည်ဟု ယုံကြည်ပါတယ် ။
September 4, 2017 at 9:50 pm
Yin Yin Mya says:
Ya Min Aung says:
Rose Shalom says:
thz alot sis
Daw Thinmu says:
တို့လူမျိုးတွေကသူများအပေါ် အရင်စပြီးရန်လုပ်စော်ကားကျူးကျော်တဲ့အဖြစ်မျိုးတော့မရှိပါဘူး ကိုယ်တွေမစည်းလုံးလို့ခံခဲ့ရတဲ့သမိုင်းတွေအများကြီးပါညီမရေ ညီမလေးရဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုလေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်
Naing Lin says:
မြန်မာဝတ်စုံနဲ့…နိုင်ငံခြားမှာ…ဂုဏ်ယူစွာဝတ်ထားတဲ့…Live Video ကို ပြန်သတိရစေတယ်…Proud of you အစ်မ..
Myathida Hlaing says:
Bo Maung says:
Sithu Htet says:
​ရှေးမြန်​မာ စစ်​သူကြီး​တွေ အ​တော်​ပုပါလား
Tin Myoehan says:
ကျွန်တော် ဗမာ လူမျိုးတစ်ယောက်ပါ။
ဂြိုဟ် တိုင် says:
ဖြူစင်တဲ့ စိတ်ထားကို လေးစားပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ ရှယ်ပါရှင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Thilashin Dawyusandar Mk says:
ပေးနေတာ။တော်တော်လေးသီးခံရပါတယ်။လူကိုလူလိုမြင်တတ်ရင်အပြစ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။အားလုံးဟာအတူတူပါ။ကိုယ့်လောက်မှမသိသူကိုအထင်မသေးသလိုကိုယ်ထက်အများကြီးသာလွန်နေတဲ့သူတွေကိုအတုယူပါတယ်။ကိုယ်တပည့်တွေကိုညွန်ပြပေးတယ်။လူဟာမသေမချင်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ခွဲခြားဆက်ဆံစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ထင်တာပဲ။တကယ်တော့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာသိပ်ကြင်နာတတ်ပါတယ်။ ကူညီတတ်တဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဓါတ်တွေအများကြီးပါ။တစ်ရံတစ်ခါမှာတော့တပည့်တွေကဆုံးမရခက်လွန်းလို့စ်ိတ်ကုန်ချင်လာတယ်။ပြီးမှပြန်အားတင်းပြီးဒီကလေးတွေဟာအညွန့်တလူလူနဲ့လူသားတွေ ။ကိုယ်။ပြုစုပေးလို့တနေ့မှာတိုင်းပြည့်အတွက်
ဘာသာ သာသနာအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ်ရင် ပင်ပန်းရကျိုးနပ်ပြီးသူတို့တွေလဲလူသားတွေအတွက်အများကြီးအကျိုးပြုနိူင်မယ်လို့မျော်လင့်ပြီးလူသားချင်းစာနာစိတ်ကိုအရင်းခံပြီးလူသားအကျိုးပြုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိူင်တဲ့အတိုင်းအတာထိလုပ်ဖို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ခံယူချက်တူလို့အားကျပါတယ်။အားပေးပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။စံပြပုဂ္ဂိုလ်အတုယူစရာမို့လေးစားလျှက်ပါ။
Salai Lian Lian says:
ရှမ်း ကလေး says:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေ
U Kaung says:
U Mg Naing says:
Jasmine Phyu says:
Me too..I love Myanmar…sis..
Chit Phoo Thu says:
အုန်း သီး says:
Zayar Htunhtun says:
Tintin San says:
Seng Hkawn says:
Joseph Thang says:
ကျနော်တွေ့ဘူးတဲ့ ချမ်းသာသောသူများဟာ များသောအားဖြင့် မြင့်မြတ်သော စိတ်သဘောထားရှိကြတယ်။Levi ,May God Bless you.
Mercy NT says:
Naing Naing says:
September 3, 2017 at 11:42 pm
Ko Zawnaing says:
လူမျိုးခွဲခြား နှိမ့်ချဆက်ဆံခြင်းကို တားဆီးကာကွယ်တဲ့ဥပဒေ” အဲဒီအတွေး အလွန်သဘောကျမိပါတယ်။ဒီနိုင်ငံရေရှည်ညီညွှတ်မှုအတွက် အတော်သင့်တော်မယ့်ဥပဒေမျိုးပါ။လေးစားပါတယ်။
တချိန်ချိန် လွှတ်တော်မှာတင်ရမယ့် အဆိုမျိုးလို့ တွေးမိပါတယ်
September 5, 2017 at 11:48 pm
Ngala Thang says:
Moe Swe says:
Aye Lwin says:
A true patriot!!!
Zeyar Kyaw Winn says:
သတိရပါတယ်ရှင် ပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့ မျော်လင့်ပါတယ်။ I Love Myanmar
U Ch In says:
Thet Thetmon says:
U Tun Aung says:
Lung Tum T C says:
September 4, 2017 at 5:39 am
Khin Maung Kyi says:
Ms please translate it into English and better post it on
September 4, 2017 at 5:56 am
Wa Di says:
Myattun Thit says:
Gyi Taw says:
Soe Swe says:
September 5, 2017 at 11:54 am
Thit Wai says:
September 4, 2017 at 6:39 am
ကိုမောင်မောင် လှိုင် says:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် i love myanmar
Dawkhin MyoMyint says:
Thomas Thoehtein says:
September 4, 2017 at 6:52 am
Nann Thet Thet Htar says:
အရမ်းကြိုက်ပါတယ် ရင်ဘတ်ချင်းတစ်ထပ်တည်းကျပါတယ် လေးစားပါတယ်ရှင်
September 4, 2017 at 6:56 am
Mgmg Htwe says:
Aung Min says:
ကျွန်​​တော်​ပို့လိုက်​​သော စာအုပ်​များ ရရှိပါပြီလားခင်​ဗျာ
စန်း မေ တ္တာ says:
Myint Soe says:
Thu Dnu says:
Kaung Kin Cho says:
Khin Win Shwe says:
Esther Mai Vlp says:
မှန်ကန်သော စိတ်ဓာတ် ဂုဏ်ယူလေးစားပါတယ်
Estherhingvlp Penghing says:
KyawKyaw Soe says:
135 မျိုးအတွက်သာ မှန်၏
September 4, 2017 at 8:51 am
မမ မော် says:
Mih Nge says:
Soo true MaMa love you Soomuch MayGodbless u more and more ❤️❤️
Ah Wu says:
Shee Lar Paw says:
Kaung Myat says:
BaBa Myo says:
Wint Mon Eindra Thwin
အကြိုက်​ဆုံးပုံပါ မ​နေ့ကမြန်​မာအမျိုးသမီး​လေးလိုက်​မလိုက်​မသိဘူး အတိုဆုံးစကတ်​ ​ပေါင်​တံ​သေး​သေး မဲမဲနဲ့ရိုက်​တာမြင်​ရ​တော့လငစိတ်​သားစိတ်​ကုန်​သွား​ရော
Shwe Twoo says:
Zaw Myint says:
absolutely right ! sis
Kyal Sin La Min says:
အခုလို မေးမြန်းတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အချိန်ယူပြီး ရေးပါဦးမယ်။
Trump Trump says:
ပုတ်​တဲ့ သစ်​သီးတလုံးနဲ့ ​ကောင်းတဲ့ သစ်​သီးတလုံး​တော့ အတူတူထား စားလို့​တော့ ရမယ်​ မထင်​ပါဘူး ပုတ်​​နေတဲ့ သစ်​သီးတလုံးကို​တော့ အပုတ်​သာထားရမဲ့​နေရာ ဆိုတာ ရှိတယ်​ အဲ့ချက်​က​လေး သတိပြုမိဖို့​တော့ လိုလိမ့်​မယ်​ထင်​တယ်​ အမ အမှားပါသွားနိုင်​ရင်​ ခွင့်​လွတ်​ပါ ကျမ ပစ္စည်း ဥစ္စာ ပညာဂုဏ်​မရှိသူ တ​ယောက်​ပါ ​
သစ်သီးပုတ်ပွရင် စားမရသလို၊ လူ ပုတ်ပွနေရင် သဂြိုလ်ရမယ်လေ။
MiMi Aung says:
September 4, 2017 at 10:53 am
Sakura Yin says:
Thank Levi .It’s absolute truth.
Sui Sui says:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပါ။
ငွေလမင်း မင်း says:
ကျန်စစ်သားကမွန်မင်းသမီးမဏိစန္ဒာကိုအနော်ရထာဘုရင်ထံဆက်သဖို့ ခေါ်လာတဲ့ဇတ်ဝင်ခန်းရိုက်တာလား
DawTin TinSan says:
Aye Thida says:
September 4, 2017 at 11:06 am
War War Thwe says:
Maung Maung says:
KO Aung says:
September 4, 2017 at 11:29 am
Mae Ohn Nyunt We says:
Well said lady.Thanks for sharing ypur wisdom.May the good Lord bless you more.
Khin Myo Thit says:
မိုး သောက်ယံ says:
Than Sang says:
Hlute Vlh says:
Ko Kyaw Moe Oo says:
September 4, 2017 at 12:35 pm
Daw San San Aye says:
Ma Thida says:
မှန်ပါတယ်တိုင်းရင်းသား၁၃၅မျိုး ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သားသမီးများပါလျှာနဲ့သွားလိုကိုက်မိလည်းခဏပါ ဒါပေမဲ့ ကို့နိုင်ငံကို့လူမျိုး
မင်း ပုညဦး says:
Daw Chit Chit says:
September 4, 2017 at 1:19 pm
Star Lay says:
Mi Mi Kyin says:
Own Shwe says:
တိုး တိုး says:
မမ​ရေ စာဖတ်​ပြီးကြည်​နူးမိပါတယ်​ မျိုးချစ်​စိတ်​အတွက်​
Than Htay Win says:
Newday Newday says:
ရွှေလင်းယုန် ရွှေလင်းယုန် says:
HlaMyo Tun says:
ထု ထုနောင် says:
Cho Mie Mie Htun says:
အမြဲတမ်း​လေးစားပါတယ်​ Sister ရဲ့စိတ်​ဓာတ်​မျိုး ကျမတို့နိူင်​ငံသားတိုင်းရှိသင့်​ပါတယ်​
Myint Myint Oo says:
အလင်း တာရောက် says:
မင်း သူ says:
Van Htar Par says:
Pa Yinn says:
Myo Than Tint says:
Ciang Khaing says:
Good! Thanks for your inspiring words!
Myo Aung Hlaing says:
အမျိုးနွယ်ဆိုတာမရှိရင်ဘယ်သွားသွားမျက်နှာငယ်တယ်အခုနိုင်ငံခြားအလုပ်လုပ်သွားတဲ့သူတိုင်းကိုကရင် ကယား ကချင်း ချင်းစသည်ဖြစ်မခေါပါအားလုံးကိုမြန်မာသာခေါသည်တိုင်းရင်းသားတွေနားလည်ရမှာကကမ္ဘာနိုင်ငံရေးအခြေနေအရင်နဲ့မတူတော့ပါဥပမာ
Suan Mang says:
Myint Myint Than says:
Ya Aung says:
U Wai Lwin says:
KO Kyaw says:
နှလုံးသားထဲက ထွက်လာတဲ့ စာသားတွေမို့ပါ
တိမ် တိုက် says:
ထွန်း စော says:
Zar Minn says:
အစ်မ ကိုအရမ်းလေး စားအားကျမိပါတယ်
U Gyi Than says:
War War Aung says:
အမလိုမျိုး တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ရှိသူကို လေးစားပါတယ် အားလုံးသောတိုင်းရင်းသားများလည်း ကိုယ့်အချင်း၂တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးကြစေချင်တယ်
September 5, 2017 at 11:50 am
အမရဲ့စာကို share ထားပါတယ် အားလုံးအတုယူဖတ်စေချင်တယ် ကျေးဇူးပါ
Hmu Tei says:
U Kyaw Win says:
Salai Mang says:
အမလို မျိူးချစ်​စိတ်​အပြည့်​ရှိတဲ့သူဖြစ်​ချင်​တယ်​
I will try my best to be like you sis
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေ
Nawzar Htwe says:
ဆပ်မနီထန်းရေ တို့တွေပြင်ဦးလွင် အထက ၁မှာ အတူတူကျောင်းတက်ဘူးတယ်လေ မှတ်မိလား
Min Yu Ko says:
Cing No says:
La Young says:
အရမ်လေးစားပါတယ် ဒိထက်မကအောင်မြင်တိုးတက်ပါစေ မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မIevi ရဲ့သမီးလေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မေတ္တာတရားကိုလည်းထာဝရလေးစားဂုဏ်ယူလျှက်ပါ
Oo Koko says:
September 5, 2017 at 1:37 am
Koko Gyi says:
Star Bmdn says:
အရှင် သံဝရ says:
Intriguing Knight says:
Naw Shee Lar says:
September 5, 2017 at 4:40 am
Joy Maas says:
U Khin Maung Yin says:
Ruth Shin MT says:
September 5, 2017 at 6:39 am
Tun Min Than says:
September 5, 2017 at 6:40 am
September 5, 2017 at 9:57 pm
မျိုထရင်ရိုထိအောင်နာတယ် မောင်ျမာင် says: